Akulungiswe ibhola eKZN | News24
Akulungiswe ibhola eKZN
ISIMO samaqembu ebhola eKZN sithanda ukungabi sihle uma ubheka izindawo zamaqembu akwelaMthaniya. Inkinga lena esibhekane nebhola kulesi sifundazwe iminyaka eminingi.
Ingabe inkinga ikuphi ngoba uma ngabe ngingaphosisi isifunda lesi esinabantu abaningi ukuzedlula zonke. Amaqembu asesigabeni esiphezulu awasebenzi kahle, kuthi esilandelayo ithuba lokukhuphukela phezulu alicaci. Akuthembisi futhi ukuthi kwiLigi kaMotsepe kungakhona ophumelelayo.
Isikhathi esiningi azikho izimfihlo empumelelweni. Imfihlo mhlawumbe ukwenza imisebenzi ngendlela eqondile. Ukukhula kwebhola kuncike ekuphathweni kwamaqembu namaligi ngendlela eqondile enobulungiswa. Ekuqeqeshweni kwabadlali ngendlela elungile kanye nokusebenza konompempe ngokuthembeka.
Isimo sesifunda ekuphathweni kwamaligi aphansi akuwasizi amaqembu ethu ukuthi akhule. Kumele abaphathi babe nothando lomsebenzi kunezikhundla. Ukuhlelwa kwemidlalo into okungafanele ibe inkinga kodwa uthola amaqembu sekufanele adlale imidlalo ngamibili kuzimpelasonto ngenxa yobudedengu beziphathimandla. Iligi igcine idlale izinyanga ezintathu ekubeni unyaka unezinyanga eziyishumi nambili. Abantu bakithi babudedengu ekuhleleni izinto. Lesi isimo ngeke usithole lapho kuphethe abaseNdiya noma abaMhlophe.
Kugcine ngeMoja FC iphethwe uMandla nezelamani zakwaMhlongo iqeqeshwa uManqoba Mnqithi ukuba neqembu elikhuphukela kuNational First Division. Inkinga enkulu kulesi sigaba imidlalo ephuzayo ukuqala kugcine kudlalwa naphakathi nezinsuku. Ingabe kuyaqondwa yini ukuthi iningi labadlali kulesi sigaba lisezikoleni? Izinga lonompempe nenkohlakalo akusizi ekutheni kukhuphuke amaqembu akulungele ukuya phezulu. Kungakuhle abaphathi bafake imali ekulungiseni izinga lokudlala kunokukhokhela onompempe imali embi. Ku SAB lapha eMgungundlovu onompempe benza kahle. Amaphutha bayawenza njengabadlali nabaqeqeshi. Kungakuhle abaqeqeshi bagxile ekulungiseni amaqembu abo kunokulwa nonompempe kungenasidingo.
Mhlawumbe nalo-R300 okhokhelwa onompempe abathathu kumele ulungiswe. Ngiyacabanga ukuthi abaxhasi bebhola kumele bafake imali ekuphuculeni amaholo onompempe. Unzima lomthwalo.